पल - अन्यजातिहरूको गर्न येशू ख्रीष्टले पठाइएको छ जो प्रेरित। त्यसैले यहूदीहरूले भनिन्छ, र स्पष्ट अन्य देवताहरूको विश्वास गर्ने सबै मानिसहरू कल जारी। जहाँ आज तपाईं यो मानिसको बारेमा के जानकारी सिक्न सक्छौं? मुख्यतया यस्तो रूपमा प्रकाशनहरू, साथै विभिन्न पुस्तकहरू, शब्दकोश र इन्साइक्लोपीडियाहरूले धार्मिक सामग्रीबाट। पुस्तकहरू अधिकांश को लेखक भनेर पाठकहरूलाई सचेत हुनुपर्छ नयाँ करारका ठीक प्रेरित पावलले छ।
यो मानिसको जीवनी आफ्नो अक्षर र पुस्तक आधारित हुन सक्छ "प्रेषितहरूको प्रेरित।" सबैभन्दा अनुसन्धानकर्ताहरूले फिर्ता सत्तर र प्रथम शताब्दीमा विज्ञापनको पहिलो आधा को eighties मिति बुक। यो प्रेरित को मृत्यु पछि लेखिएको थियो, र यसको ग्रन्थकारिता को इंजीलवादी लूका श्रेय छ। तपाईं जो तिनीहरूले पावल आफै बताइरहेका थिए भने केही पदहरू "प्रेषितहरूको प्रेरित" प्रस्तुत छ कि आरोप लेख पाउन सक्नुहुन्छ।
यस्तो कथन तर्क पहिलो व्यक्ति मा कहानी, अनि प्रेरित आफूलाई को त शब्दहरू। वास्तवमा, यस्तो तर्क केवल अस्थिर, तर पनि अनौठो छन्। "त्यहाँ हामीलाई र पावलले थियो" र यति मा, "हामी र पावलले": को विलक्षणता प्रेरित पुस्तकको लेखक साँच्चै शब्द "हामी" प्रयोग गर्दछ छ, तर यसले भन्छन्। यी तिनका साथीहरू को एक को शब्दहरू हुन् कि स्पष्ट छ। प्रेरित पावलले आफ्ना epistles लूका, उसलाई रहन्छ भनी भनिएको आफ्ना सँगी र प्रिय डाक्टर उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैले, पछि अन्यजातिहरूको शिक्षकको भइन् प्रेरित पावलले, टार्सस शहरमा जन्म भएको थियो। यो दक्षिण को राजधानी थियो एशिया माइनर को। यसलाई आफ्नो बुबा बिन्यामीनको कुलको थियो कि विश्वास छ। आफ्नो नाम छ शावल, भविष्यमा प्रेरित मानिन्छ राजा शाऊलले सम्मानको थियो। आफ्नो दोस्रो नाम, क्रमशः पावलले। आफ्नो आमाबाबुले whipping उहाँलाई खाली, पछि प्रेरित गर्न सेवा चढाउँथे थियो जो रोमन नागरिकता, थियो।
रोम को नागरिकता माथि, को पाठ्यक्रम, को मूर्तिपूजक वातावरण संग बारम्बार सम्पर्क समावेश हुनत शाऊलले फरिसीहरूको सख्त परम्परा हुर्केका थिए। धेरै प्रसिद्ध र ती दिन pharisaical कुलपिता, परमेश्वरको व्यवस्थाको शिक्षक सम्मान - त्यसपछि, यो एक शिक्षक गमलिएलजस्तै बन्नेछ। प्रेरित पावलले आफ्ना पत्रहरूमा फरिसीहरूले शिक्षा को एक प्रबल समर्थक मान्छ। प्रेरित पुस्तकमा उहाँले, एक जवान रूपमा, यहूदीहरूले मृत्यु Deacon स्टीफन मसीही चर्च कुटपिट रूपमा हेर्नुभयो कसरी वर्णन गर्दछ।
तब देखि शाऊल जोसिलो र पनि fanatically मसीहीहरूलाई सताउन थाल्छ। दमीशक शीर्षक, उहाँले अचानक एक अलौकिक शक्ति रोकेको र ख्रीष्टियन रूपान्तरित भएको थियो। यस मामला मा, आफूलाई थियो प्रेरित सधैं यो आफ्नो पुर्खाहरूको परमेश्वरको सेवा गर्न जारी, तर साँचो मुक्तिदाता येशू ख्रीष्ट पहिचान कि, पुरातन अगमवक्ताहरूको लेखोटहरूमा प्रतिज्ञा विश्वास गरे। अब शाऊल ख्रीष्ट मुक्तिदाताको जोसिलो प्रचारक रूपमा बन्ने थियो। तीन वर्ष, मा भविष्यमा प्रेरित जीवन अरब मरुभूमि। त्यहाँ पावलले अनुसार, यो येशू आफैले थियो र उहाँलाई साँचो सिद्धान्त सिकाउनुभयो।
त्यसपछि उहाँले दमास्कस नयाँ सिद्धान्त प्रचार गर्न खोज्छ, तर उहाँले यहूदीहरूको अनुमति थिएन। त्यसपछि पावलले येशू याकूबले, पत्रुस, यूहन्ना प्रेषितहरूको संग पूरा जहाँ यरूशलेम, जान्छ। पछि, आफ्नो पैतृक टार्ससका मा निवास धेरै वर्ष पछि, प्रेरित पावलले जहाँ उहाँले भनिएको एन्टिओक, गए प्रेरित बर्णाबासले। त्यहाँ अन्यजातिहरूको गर्न एन्टिओक एक वास्तविक Awakening छ। बर्णाबासले शावललाई ख्रीष्टको रूपान्तरण विश्वास र येशूको अन्यजातिहरूको आफ्ना प्रेरितहरूलाई छान्नुभएको।
तिनीहरूले सँगै आफ्नो मिसनरी यात्राको गरे। तिनीहरूलाई बर्णाबास र मार्क को एक भान्जा थियो, र त्यसपछि पावलले LUCA, जो पछि पुस्तकको एक इंजीलवादी र लेखक भए को स्थिर साथी बन्छन् "प्रेषितहरूको प्रेरित।" व्यक्तिगत पावलले म्यासिडोनिया, गलातीयामा, कोरिन्थ थिस्सलोनिकीका, फिलिप्पीमा सहित थुप्रै मसीही मण्डलीहरू स्थापित।
साथै प्रेरित जीवन र कामहरू बारे इभानजेलीकल पदहरू विशुद्ध धेरै अन्य पुस्तकहरु र कथाहरू बताउन। को संरक्षित परम्परा अनुसार, त्यो '64 मा रोममा नीरो को सतावट समयमा decapitation कार्यान्वयन भएको थियो। प्रेरित पावल र पत्रुस चर्च 29 जुन मा celebrates को स्मृति।
यहूदा - यो हुनुहुन्छ? यहूदा इस्करियोत ख्रीष्टको धोका?
मान "Starorusskaya" हाम्रो लेडी
चिकन र मशरूमबाट डिश
कसरी एक दिनमा एक खोकी निको गर्न: परम्परागत चिकित्सा को9तरिका
कसरी ईर्ष्या देखि "omez" लिने?
इटालियन strollers - सबै भन्दा राम्रो विकल्प आफ्नो बच्चाहरु को लागि
Bolle - शैम्पेन वा ...?
जाडो गहुँ: बढ्दै, प्रशोधन र किसिमहरु